AtEvent Card Scanner: machiini ma welie Lead Capture na Ihe | Martech Zone
AtEvent Card Scanner: machiini ma welie Lead Capture na Ihe
Tuesday, June 2, 2015 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ana m aga Chicago echi Ajụjụ a ton nke ụlọ ọrụ na Nzukọ na-ere ahịa na Internetntanetị. Standardkpụrụ m dị na nke a bụ idekọ ajụjụ ọnụ site na ụbọchị, dee ederede, nakọta kaadị azụmahịa, wee banye n'ụlọ nkwari akụ m mgbe ndị ọzọ na-ezukọ maka ị drinksụ mmanya.
Tupu m chefuo ihe ọ bụla, ana m edozi kọntaktị niile na LinkedIn wee dee ederede maka onwe m na ịgbaso ebe ọ dị mkpa. Ohere inweta bụ, aga m atụ uche di na nwunye na ha ga-emetụ izu ole na ole gachara na-eche ihe mere. N'ihe niile n'eziokwu, echere m na m maara nke ọma mana ọ na-adịkarị ka mmadụ anaghị echefu. Ọfọn ... enwere ngwa maka nke ahụ!
atEvent's Card Scanner mobile app bụ maka ndị na-ere ahịa iji nakọta data kọntaktị na ihe omume ahụ site na ntinye aka ma ọ bụ naanị nyochaa kaadị ahụ na iji OCR (gnitionghọta Ọdịdị Ahụhụ). Na ngwa ha ejikọtara - ị nwere ike ịkwanye data ahụ kpọmkwem na CRM gị (Njikọ Mmekọrịta Ndị Ahịa) yana ihe omume ahụ gosipụtara nke ọma.
Ejiri ngwa atumatu atEvent Card Scanner jikọtara ya na ngwa ahịa azụmaahịa a na-ejikarị ma tụkwasịrị obi yana sistemụ CRM, na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịnyefe data atụmanya ziri ezi nke ọma na sistemụ ha masịrị ma bido usoro nurtụ ozugbo.
Ọ bụrụ na ị na-na na Integrated naEvent na gị Ahịa ahia n'elu ikpo okwu, ị nwere ike ime ihe omume ozugbo ịmalite mkpọsa na-azụlite na kọntaktị.
Ihe di iche na isi okwu nke atEvent bu na ndi ana akpo gbakọtara na ọkwa nzukọ, na-enyere ndị ọkachamara ire ahịa aka ịhụ otu kọntaktị ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme na nzukọ maka ihe omume niile ndị otu ha nọ na ya.
Ikpo okwu na-abịa na ezigbo akụkọ ebe i nyochaa na arụpụtaghị nke gị ahịa otu si n'ụlọ gị ọrụ ma ọ bụ post omume.
Tags: iri asaanyocha kaadị azụmahịanwude ndukaadị nyochandu ndu mkpụkpuCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaomume nwude ndundu nurturingakụrụngwa ahịanzute ndu nwudeỌktngwa anya agwa ude
Biko Kwụsị iji NSA nyocha na ahịa
Na mmechi - akuko nke iji na - azo ahia ahia ahia!